Masuuliyiin ka tirsan Dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ka qeybgalay Xaflad lagu dhiirigalinayey Arday baratay Farsamada Gacanta +SAWIRRO – Radio Muqdisho
Qaar kamida boqolaalkaan arday oo ka aflaxday xaruunta horumarinta farsamada gacanta ee xayle Bariise ayaa xaflad qalin jabin ah oo loo qabtay ku soo badhigay qaar kamida farsamooyinkii ay barteen sida, farsameynta qeybaha korontada, dhisamaha iyo makaanikada.
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshadda ayaa ka qeyb galay xaflad lagu dhiirigelinayay ardeydaan oo muddo labo sano ah baranaayay xirfadahaan kala duwan.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamuud Cabdikariin Gabeyre iyo Agaasimaha NIIS Foundation Qaasim Gaabow Ducal ayaa shegay In loo baahnayahay in la iska kaashado sidii shaqo loogu abuuri lahaa ardaydan oo dadaal dheer soo galay.
Maareeyaha wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay barashada farsamada gacanta oo uu sheegay in uu dalku aad ugu baahanyahay, isago dhinaca kale qaar kamida ardayda u ballan qaaday in ay shaqaaleysiin doonaan.
Gudoomiyaha guud ee xaruunta farsamada gacanta ee Xayla Bariise Badri Cabdi Xayle Bariise ayaa xusay in uu aaminsanyahay in uu guuleystay hadafkii xaruuntaan loo aas aasay, maadaama ay soo saartay arday isku filan oo dalkooda wax badan u qaban kara.
Wasiiru Dowlaha Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle [Jaabiri] oo xafalada soo xiray ayaa sheegay in ay dowladda ka go,antahay In fursad la siiyo dhalinyradda waxbaratay oo uu tilmaamay in ay dalka lafdhabar u yihiin, wuxuuna dhinaca kale shirkaddaha dalka ka shaqeeya kula dar daarmay in aysan shaqada la doonan Ajaaniibta ee ay uga faaiideeyaan dhallinyaradda dalka wax ku baratay.
Qaar kamida ardayda qalin badalatay ayaa ugu dambeyn munaasabadda lagu gudoonsiiyay shahaadooyin iyo qalab casri ah oo ay uga faa’iideysan doonaan farsamadii ay barteen.
Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya oo shir caalami ah kaga qeyb galay dalka Talyaaniga